“Umaddan Anagaa U Noole Maxaad Ku Samayn Lahayd Haddaad Cidlo Ka Hesho…” Prof Cabdi Cali Jaamac – somalilandtoday.com
“Umaddan Anagaa U Noole Maxaad Ku Samayn Lahayd Haddaad Cidlo Ka Hesho…” Prof Cabdi Cali Jaamac
Warbixintii Baanka; Mid Mise inta kale
Warbixintii Baanka dhexe soo saaray shalay/dorraad ayaa iga yaabisay. Runtii, xilligan oo kale sannad kasta sarrifku hoos buu u dhacaa. Waxana sabab u ah xoolaha dhoofaya Carafada iyo dadkeena qurbaha ka yimaadda xilliga xagaaga; labaduba waxay badiyaan dollarka wareegaya suuqa, taasoo jabisa sarrika.
Haddaba halka xaqiiqadu ay sidaa tahay ayuu haddana warbixintiisa uu ka dhigay qodobka afraad ee ugu danbeeya; wuxu ka horraysiiyay dhawr sababood oo kale oo isagu uu ku sheeganayo inuu ka danbeeyay hoos u dhaca sarrifka. xaqiiqaduna waxa weeye in xilligan oo kale sannad kasta uu jabo sarrifku sababta aynu soo sheegnay awgeed oo kaliya; walaa baanka dhexe; walaa sabab kale ayaan jirin oo jabisay sarrifka oo aan ahayn taas.
Cidda kaliya ee sarrifka jabay uu waxtari lahaa waa dadka dakhligoodu ku salaysan yahay shilling Somaliland-ka sida warbixinta baankuba sheegtay; hase ahaatee taasi ma dhacdo, maxaa yeelay bakhaarada iyo dukaamadu waxay garaacayaan qimmihii sarrifka ee hore;
Dhinaca kale, qolada biilkooda ku hela dollarka sida shaqaalaha hay’adaha iyo qoysaska qurbaha laga biiliyo, iyaga waxa ka lunta lacag; waxana faaidada oo dhan hela ganacstada oo xilligan ka noolaada, halka warbixinta baanku been cad sheegtay iyadoo tidhi waxa faa’iidada hela dadka masaakiinta ah ee dakhligooda ku hela Somaliland Shiliing-ka sida askarta iyo shaqaalaha dawladda. Alla hafar weynaa!!!!
Waxa kale oo aan la yaabay khidaabka ama qaabka hadal-jeedinta oo u ekaa kii kacaankii Siyaad Barre; wallahi waxan mooday in aan dhegaysanayo reedhyow Muqdisho oo aan joogo 1980-kii; huuhaada iyo dig-digta warbixitaasi xambaarsanayd waan u qaadan waayay!!!!!!; nuxurkeeduna wuxu ahaa in muwaadinka miskiin-ka ah la moodsiiyo in dadaal la sameeyay awgeed uu sarrifku ku jabay; adeer, kuwan annagaa u noole , maxaad ku samayn lahayd haddaad cidlo ka hesho!!!!!!
Cabdoo: u dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada iyo dawladnimada